भारतमा बर्ड फ्लू नियन्त्रण बाहिरः नेपालमा बढ्यो जोखिम, के छ सरकारको तयारी ? « Lokpath
२०७७, २८ पुष मंगलवार १०:०१
भारतमा बर्ड फ्लू नियन्त्रण बाहिरः नेपालमा बढ्यो जोखिम, के छ सरकारको तयारी ?
‘वेलैमा सावधानी नअपनाए भयावह हुनसक्छ’
प्रकाशित मिति : २०७७, २८ पुष मंगलवार १०:०१
काठमाडौं । कोभिड १९ को महामारीसँग जुध्दै गरेको भारतलाई अहिले बर्ड फ्लूले थिलथिलो बनाइदिएको छ । कोरोना महामारीविरुद्ध आउँदा महिनाहरूमा लाखौँको सङ्ख्यामा खोप लगाउने अभियानको तयारी शुरु गरिरहँदा भारतमा बर्ड फ्लूको नयाँ सङ्कट आइपरेको हो ।
राजस्थानबाट शुरु भएको बर्डफ्लू अहिले भारतको ९ वटा राज्यमा फैलिसकेको छ । उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र हुँदै राजधानी दिल्लीमा समेत बर्ड फ्लू पुष्टि भइसकेको छ ।
पहिलोपटक राजस्थानमा सन् २०२० को डिसेम्बर २५ मा बर्ड फ्लू देखिएको थियो । एकाएक कुखुरा तथा हाँसको मृत्यु हुन थालेपश्चात् परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको थियो ।
पछिल्लो केही हप्ताभित्रै हरियाणामा ४ लाख पन्छीहरुको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै केरलामा १२ हजार हाँसको मृत्यु भएपछि संक्रमण फैलिनबाट रोक्न राज्यको मापदण्डअनुसार विभिन्न ३६ हजार पन्छी मारिएको छ ।
भारत सरकारले उच्च सतर्कता जारी गर्दै बर्ड फ्लू फैलिन नदिनका लागि आपत्कालीन उपायहरू अपनाउन भनेको छ । मानिसहरूलाई मरेका वा बिरामी देखिएका चराहरू नछुन भनिएको छ । केही जिल्लाहरूमा पन्छी बिक्री गर्ने पसलहरू समेत बन्द गरिएका छन् भने अन्डा बिक्रीको काममा समेत रोक लगाइएको छ ।
नेपालमा कस्तो छ सुरक्षा तयारी ?
छिमेकी मुलुक भारतमा बर्ड फ्लूको संक्रमण भुसको आगोसरि सल्किएपछि नेपालमा पनि यसको जोखिम बढेको छ ।
विशेष गरी भारतसँग सिमाना जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा कुखुरा, हाँस लगायत पन्छीहरुको ओसारपसार कायम हुने सम्भावना रहेको छ । यस्तो वेला व्यापारीहरुले खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
भारतमा फ्लू देखिएपछि उताको कुखुराको मूल्य सस्तो हुने हुँदा सीमा क्षेत्रका व्यापारीहरूले उताबाट कम मूल्यमा कुखुरा ल्याएर यताको बजारमा महंगो मूल्यमा बेच्न सक्छन् । यसले एकातिर नेपालमा बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्छ भने अर्कातिर कालो बजारी ।
त्यसैले, भारतसँग जोडिएको प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन जिल्ला पशु कार्यालयलगायत सम्बद्ध निकायमा खबर गरिसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए । मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थाका लागि थप जनशक्ति तथा मेशिनरी सामाग्र आवश्यक परेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेको डा.घिमिरेले बताए ।
नेपालमा बर्डफ्लु भित्रिन नदिन प्रदेश २ को आठवटै जिल्लाको दक्षिणी सीमासँग जोडिएको नाकामा रहेका सशस्त्र प्रहरीलाई निगरानी बढाई थप कडाइ गर्न भनेर परिपत्र गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले बताएका छन् ।
प्रदेश नं २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म ४६४ किलोमिटर दक्षिणी सीमा क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ र उक्त सीमा नाकामा ६७ वटा बिओपी र ३५ वटा एफओपी को पोष्ट रहेको छ । ती पोष्टमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीलाई भारतबाट पन्छीजन्य वस्तुको आयातमा रोक लगाउन भनी निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
नेपालमा बर्ड फ्लूको संक्षिप्त इतिहास
नेपालमा पहिलोपटक सन् २००९ मा बर्ड फ्लू देखिएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्षजसो अथवा केही वर्षको अन्तरालमा बर्ड फ्लू देखिइरहन्छ नेपालमा पनि ।
यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति चाहिँ सन् २०१३ मा पु-याएको थियो । त्यसवेला काठमाडौं, चितवन, धादिङ, झापादेखि कैलाली गरी नेपालका २ सय १ वटा ब्रोइलर र लेर्यस कुखुराका फार्महरूमा यसको संक्रमण फैलिएको थियो ।
त्यसैगरी, बर्ड फ्लूकै कारण नेपालमा पहिलोपटक मानिसको ज्यान गएको घटना भनेको वि.सं २०७५ साल चैत १५ गते भएको थियो । ज्वरो र खोेकीको लक्षण देखिएपछि अस्पताल पुगेका २१ वर्षीय युवामा पछि श्वासप्रश्वासको समस्या पनि देखिएको थियो । उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । के कारणले मृत्यु भएको भनेर खुट्याउन नसकेपछि परीक्षणका लागि उनको र्‍याल जापानको प्रयोगशालासम्म पु-याइएको थियो । वि.सं २०७६ साल वैशाख १७ गते बल्ल नमूना परीक्षणको नतिजा आइपुगेको थियो जसमा उनी बर्ड फ्लू संक्रमित रहेको पुष्टि भएको थियो ।
के हो बर्ड फ्लू ?
इन्फ्लूएन्जा भाइरसको कारण चराहरुमा फैलिने एभिएन इन्फ्लूएन्जा नामक संक्रामक महामारी हो बर्ड फ्लू । इन्फ्लुएन्जा भाइरसका तीन समूह हुन्छन् जसमध्ये समूह ‘ए’मा पर्ने भाइरसको संक्रमणबाट चराहरुमा फैलिने महामारी रोगलाई बर्ड फ्लू भन्ने गरिन्छ ।
जंगली चराहरु त्यसमा पनि विशेषगरी सीमसारतिर बस्ने चराहरुमा यो भाइरस पाइन्छ । यसको संक्रमण भने सबै प्रजातिका चराहरुलाई हुने गर्छ । जंगली चराहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुने भएकाले यस भाइरसले घर पालुवा पन्छी जस्तो तिनीहरुलाई थला पार्न सक्दैन । त्यस्ता चराहरुमध्ये पनि विशेष गरेर जंगली हाँसमा यो भाइरसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता निक्कै बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
यस भाइरसको संक्रमणले कुखुरा, टर्की, हाँस जस्ता घरपालुवा चराहरुलाई भने निकै असर पुर्‍याउँछ । जसको परिणामस्वरुप घरपालुवा चराहरुमा छिट्टै नै यसको संक्रमणले महामारीको रुप लिन पुग्छ ।
विश्व कोरोना महामारीसँग लडिरहेका वेला बर्ड फ्लूको महामारीले थप तनावपूर्ण स्थिति निम्त्याउन सक्छ । विशेष गरेर भारतसँग खुल्ला सिमाना भएकाले नेपाल अझै बढी यसको जोखिममा छ । संक्रमण फैलिएपछि त्यसको रोकथामका लागि स्रोतसाधन जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने हाम्रो जस्तो राष्ट्रले यसबाट जोगिने एउटा मात्र भरपर्दो उपाय भनेकै पूर्वतयारी हो । सरकारले तत्काल यसको लागि ठोस कदम नचाले परिस्थिति भयावह हुनसक्ने विज्ञहरुको ठहर छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको आधिकारिक ट्वीटर अकाउण्ट पोट्सको अधिकार
चीनमा आगलागीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा १३.६ प्रतिशतले कमी
काठमाडौँ– सन् २०२० मा आगलागीबाट चीनमा एक हजार १८३ जनाको मृत्यु भएको छ
जर्मनीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५० हजार नाघ्यो
काठमाडौँ– जर्मनीमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित ५० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको जर्मनीका रोबर्ट कोच इन्स्टिच्युट
ट्रम्प-मेलानियाबीच डिभोर्सको चर्चा, ह्वाइट हाउसमा छुट्टा-छुट्टै बेडरुममा सुत्थे
काठमाडौं । अमेरिकाको सत्ता परिवर्तन भइसकेको छ । जो बाइडेन अमेरिकाको सबैभन्दा वृद्ध